DoBox ichatibvumidza isu kushandisa mbeva pane iyo iPad isina Jailbreak | IPhone nhau
DoBox ichatibvumidza isu kushandisa mbeva pane iyo iPad isina Jailbreak
Rimwe rematambudziko rinotarisana neIpad patinotaura nezve kugadzirwa kushomeka kwechituko chinotibvumidza kuti tikurumidze kupururudza nepahwindo nekushandisa. IPad yakagadzirirwa kushandisa zvemukati nekukurumidza nekushandisa kweminwe yako, asi kana isu tikataura nezve kugadzirwa, mamiriro akaipisisa atingawana ndeokuti isu tinofanirwa kusiya keyboard kuti tibaye chidzitiro uye tiite akasiyana mabasa. Maitiro aya anotikanganisa zvachose uye anotipedzera nguva yakakosha. Chokwadi kana iwe ukashandisa komputa kunyora uye chero chikonzero iwe unofanirwa kushandisa iyo iPad zvishoma nezvishoma, unenge waona kunzwa uku.
Kubudikidza neJailbreak tinogona kuwana akasiyana tweaks ayo anotiratidza iyo mbeva cursor pachiratidziri, Asi havazi vese vane Jailbreak pane yavo kifaa kana vari kuda kuzviita. Uye zvakare, iwo ma tweaks aibvumidza haachaenderani neshanduro dzichangoburwa dzeIOS. Kutenda kuDoBox, tinogona kushandisa mbeva kudzora iyo iPad uye nekudaro kukwanisa kushandisa zvine chigadzirwa.
DoBox bhokisi diki rinobatanidza kuburikidza neBluetooth kune iyo iPad, uye pamusoro pekusanganisa mbeva, inotibvumidzawo kuti tishandise semunhu asina kuverenga kadhi reS SD uye zvakare ane HDMI uye RJ45 port. Asi kunyangwe ichitaridzika sei pakutanga, zvinoenderana neyemugadziri wechigadzirwa ichi, mbeva inongoshanda chete nemaapplication anoenderana neDoBox, saka zvingangoita kuti pane mashoma mashandisirwo anoenderana.
Chigadzirwa hachisi chidiki, saka hazvisi nyore kutakura. Sezvatinogona kuona muvhidhiyo, yakati kurei muhukuru pane Mac Mini. Pfungwa yemugadziri uyu ndeyekuvhura chishandiso ichi munguva pfupi kune iyo Kickstarter yemari chikuva kuti uwane mari yakakwana yekuigadzira yakateedzana. Pamwe zveiyo iPad Mhepo, haina kunyanya kukosha, asi kune iyo Pro Pro ini ndaizozviona sechisarudzo kana tikangoshanda chete nemudziyo iwoyo. Iwe une ruzivo rwese mu purojekiti webhusaiti, kwaunogona zvakare kunyorera kuti ugamuchire nhau.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » DoBox ichatibvumidza isu kushandisa mbeva pane iyo iPad isina Jailbreak
CloudMagic, iyo email nyowani iri gore reiyo iOS